Football Khabar » रियल मड्रिडको लगातार चौथो जित : एथ्लेटिकोसँगको दूरी ३ मा छोट्यायो
रियल मड्रिडको लगातार चौथो जित : एथ्लेटिकोसँगको दूरी ३ मा छोट्यायो
स्पेनिस ला लिगा फुटबल प्रतियोगितामा रियल मड्रिडले लगातार चौथो जित निकालेको छ । गत राति भएको लिगको २४औं साताको खेलमा रियल मड्रिडले रियल भाल्लाडोलिडमाथि उसकै घरमा ०–१ को संघर्षपूर्ण जित निकालको हो । रियलका लागि लिगमा यो लगातारको चौथो जित हो ।
पछिल्ला ४ खेलमा १०० प्रतिशत जित निकाल्दै रियलले उपाधि होडमा आफूलाई उभ्याएको छ । यो जितसँगै रियलले लिग लिडर एथ्लेटिको मड्रिडसँगको अंक दूरी पनि ३ अंकमा छोट्याएको छ । जबकि, दुई साताअघिसम्म रियल एथ्लेटिकोभन्दा १३ अंकले पछि थियो । तर, त्यो खुम्चिएर अब ३ मा झरेको छ । तर, एथ्लेटिकाले रियलको भन्दा एक खेल कम खेलेको छ ।
घरेलु टोली भाल्लाडोलिड विरुद्ध उत्रिँदा रियलका सिनियर टोलीका ९ जना खेलाडी चोटका कारण उपलब्ध थिएनन् । तैपनि, पाहुना टोलीले कठिन जितका साथ महत्त्वपूर्ण ३ अंक जोड्न सफल भयो । खेलभरिमा रियलका ३ गोलले मान्यता पाएका थिएनन्र । मारियाआनोका २ गोल रद्द हुँदा कासेमिरोको १ गोल पनि रद्द भएको थिो ।
तर, दोस्रो हाफमा रियलले विजयी गोल हान्यो । खेलको ६५औं मिनेटमा ब्राजिलियन प्ले मेकर कासेमिरोले गोल गर्दै घरेु टोलीविरुद्ध अग्रता दिलाए । उनले टोनी क्रुसको पासमा गोल गरेका थिए । क्रुसले फ्रि किकमार्फत् बक्समा हानेको बलमा कासेमिरोले हेडिङमार्फत् गोल गरेका थिए ।
अन्ततः सो गोलपछि खेलमा दुवै समूहबाट थप गोल हुन नसक्दा खेल रियलले ०–१ ले जित्यो । अब यो जितपछि रियलले २४ खेलबाट कूल ५२ अंक बनाएको छ । ऊ दोस्रो स्थानमा रहेको छ । एक खेल कम खेलेको एथ्लेटिको ५५ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ । अहिले रियल एथ्लेटिकोभन्दा मात्रै ३ अंकले पछि छ । यता, २२ खेल खेलेको बार्सिलोना ४६ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति ९ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०१:२१
एभर्टनले पनि बाँकी राखेन लिभरपुललाई : लिगमा लगातार चौथो हार !
एथ्लेटिको मड्रिडको दीनदशा सुरु : लेभान्टेसँग आफ्नै घरमा नमिठो हार !
बुन्डेसलिगा : लिग लिडर बार्यन म्युनिख फ्रान्कफुर्टसँग पराजित
च्याम्पियन्स लिगमा पेनाल्टीबिना मुस्किल छ मेस्सीलाई : हेरौं यो सिजनको तथ्यांक
चेल्सीलाई साउथह्यामपटनले रोक्यो : उक्लियो चौथो स्थानमा
हिम्मत हारेका छैनन् जिदानले : ला लिगा उपाधि होडबारे यसो भन्छन्
कासेमिरोलाई २०२० को प्रतिष्ठित अवार्ड
एमबाप्पेले जोर्डी अल्बालाई ‘म तिमीलाई सडकमा मार्छु’ भनेपछि …… (भनाभनको पूरा संवाद)